Ciyaarta Crab Apk Download ee loogu talagalay Android [Ciyaarta] - Luso Gamer
Dadku waxay horey u maqleen taxanaha caanka ah ee Ciyaaraha Squid ee la gaari karo si loogu daawado Play Store. Hadana diirada sheekadu waxay leedahay ciyaaro kala duwan ayaa la habeeyey. Oo maanta halkan waxaan mar kale kula soo noqonnay codsi cusub oo ciyaaraha ah oo loo yaqaan Crab Game Apk.
The Ciyaarta 2D gabi ahaanba waxay ka tarjumaysaa goobta furitaanka ee ciyaarta Squid. Halkaas oo dadka loo dhiibo hawsha ay kaga gudbaan khadka cas 5 daqiiqo ka hor. Haddii caruusadu ku guulaysato dareenka dhaqdhaqaaqa cayaartoyga marka uu ciyaarayo. Markaas kuwa waxaa loo tixgelin doonaa in la tirtiro.
Markaan eegno gameplay markaas waxaan ogaanay in ay macquul tahay in aan ka gudubno xariiqda waqti cayiman. Laakin cilmi baaris qoto dheer ka dib, waxaan ku guuleysanay inaan keeno tabaha muhiimka ah ee caawin kara badbaadada. Markaa waxaad diyaar u tahay inaad ku raaxaysato gameplay ka dibna soo deji Crab Game Android.
Waa maxay Crab Game Apk
Crab Game Apk waa codsi ciyaaraha adventurous online ah. Halkee ciyaartoyda android siiyey fursadan weyn si ay u noolaadaan gudaha garoonka dogging dhimashada isticmaalaya xirfado cad. Xasuusnoow haddii boombaleelku uu ku guulaysto ogaanshaha dhaqdhaqaaqa.
Markaas dableydu waxay toogan doonaan aragtida kowaad oo waxay baabi'in doonaan cayaaryahanka. Ciyaartu waxay si buuxda uga tarjumaysaa sheeko filim. Taasi waa la daabacay oo lagu sii daayay Netflix iyadoo leh magaca Squid Game. Inkastoo ilaa hadda codsiyo ciyaaraha kala duwan lagu sii daayay online.
Xitaa qaar badan oo ka mid ah ciyaarahaas kala duwan ayaa laga heli karaa onlayn. Laakiin markaan sahamino barnaamijyadaas ciyaaraha, waxaan u helnay kuwo fudud oo xiiso leh. Hase yeeshee, khariidadaha ay ku jiraan nashqadaha ayaa la dhowray. Laakiin markaan ka hadalno ciyaartan gaarka ah.
Waxaan helnay qaab-dhismeedyo badan oo ay ku jiraan mawduucyo gudaha ah. In kasta oo gelitaanka khariidadahaas aanay suurtogal ahayn. Laakiin haddii ciyaaryahan kasta uu ku guuleysto dhammaystirka howlgalka. Kadibna khariidad cusub iyo naqshad ayaa si toos ah u bilaabmi doonta. Markaa waxaad diyaar u tahay inaad ku raaxaysato ciyaarta cusub ka dibna ku rakib ciyaarta Crab Game Download.
magaca Ciyaar carsaanyo
Magaca Xidhmada com.crab.luzverde.muevete.gamebridge
Loobaahanyahay Android 4.4 iyo Plus
Category Ciyaaraha - Adventure
In kastoo Graphics iyo Pixel cufnaanta lagu isticmaalo gudaha ciyaarta ay horumarsan yihiin oo cufan yihiin. Sababo la xiriira is dhexgalka qoto dheer ee sawirada horumarsan, ciyaartoygu waxay ku raaxaysan karaan gameplay siman. Haddana la tixgelinayo taleefannada casriga ah ee duugga ah iyo kuwa horumarsan.
Soosaarayaashu waxay isticmaaleen garaafyo dheellitiran oo leh 2D Design. Markii aan ciyaarta ku ciyaarnay taleefannada casriga ah ee Android ee kala duwan, waxaan gudaha ka helnay seddex mawduuc oo kala duwan. Sidaan horey u soo sheegnay in dhamaystirka heerka hadda la joogo wakhtiga ay si toos ah u furi doonto khariidad cusub oo soo socota.
Dhammaan ciyaartoydu waxay u baahan yihiin inay sameeyaan waa uun inay ciyaartoyga ka doortaan xiddiga menu-ka ee bilawga ciyaarta. Gameplay gudaha ah calaamad yar ayaa lagu soo bandhigi doonaa geeska sare ee midig. Guji astaantaas gaarka ah ayaa kaa caawin doonta furitaanka dashboardka dejinta.
Xulashada dejinta gudaha, muusiga iyo kantaroolaha gariirka ayaa la bixiyaa. Xusuusnow haddii aad diyaar u tahay inaad guuleysato oo aad ku noolaato gudaha saaxada. Waxaan kugula talineynaa inaad si taxadar leh u dhegeysato muusikada. Sababtoo ah maqnaanshaha garaaca muusikada waxay ku dambayn doontaa ogaanshaha.
Qodobka ugu muhiimsan ee aan iloobin inaan xusno waa saacadda. Had iyo jeer isha ku hay oo hubi saacadda wakhti wakhti wakhti ah. Markaa waxaad aaminsan tahay in xirfadahaaga ciyaartu ay cad yihiin ka dibna soo deji oo rakib nooca ugu dambeeyay ee Crab Game Apk Android.
Ma jiro isdhexgalka codsiga oo la gaari karo.
Interface ciyaarta waa mid fudud oo mobile-saaxiibtinimo leh.
Saddex maab oo waaweyn ayaa lagu gaari karaa gudaha ciyaarta.
4 ciyaartoy oo kala duwan ayaa diyaar u ah inay doortaan.
Dashboard-ka habaynta gaarka ah waxa uu caawiyaa hagaajinta mugga iyo dhawaaqa.
Sida loo soo dejiyo Crab Game Apk
Halkii aad toos ugu boodi lahayd rakibaadda iyo ka faa'iidaysiga app-ka ciyaaraha. Tallaabada ugu horreysa waa soo dejinta iyo in dadka isticmaala android ku kalsoonaan karaan website-kayaga. Sababtoo ah halkan boggayaga, waxaan kaliya ku daabacnay faylalka Apk ee dhabta ah iyo kuwa asalka ah.
Si loo hubiyo amniga isticmaalaha iyo sirtiisa, waxaan ku rakibnaa Apk-ka talefannada casriga ah ee Android ee kala duwan. Ilaa aan hubinno habsami u socodka hawlaha Apk. Waxaan marnaba off in gudaha soo dejinta ee isticmaalayaasha android.
Waxaan mar hore ku dhex milmay app-ka ciyaaraha taleefannada casriga ah ee android ee kala duwan. Oo waxaan helnay app-ka ciyaaraha fudud oo shaqeynaya iyada oo aan wax qalad ah lahayn. Haddana waligeen ma hayno xuquuqda daabacaada ee codsiga, taas oo macnaheedu yahay rakib oo ku raaxayso gameplay khatartaada.
Qaar badan oo ka mid ah apps-ka ciyaaraha adventurous kala duwan ayaa lagu daabacay oo la wadaaga halkan. Xitaa qaar ka mid ah ciyaaraha caanka ah ayaa halkan la gaari karaa. Si aad u sahamiso ciyaarahaas la heli karo fadlan ku dhufo xidhiidhka la bixiyay. Kuwaasi waa Huggy Wuggy Poppy Playtime Apk iyo Pikmin Bloom Apk.
Markaa waxaad jeceshahay taxanaha shabakadda ee Game Squid oo aad u raadiso goob khadka ah. Si aad u soo dejiso oo ugu raaxaysato gameplay bilaash ah. Markaa waxaan ku talinaynaa kuwa isticmaala android gamers soo dejisan oo rakibi nooca ugu dambeeyay ee Crab Game Apk.
Categories Adventure, Ciyaaraha Tags Ciyaarta 2D, Ciyaar carsaanyo Android, Crab Game Apk, Ciyaar carsaanyo Apk Download, Ciyaar carsaanyo Download Post navigation
Movcine Apk u soo daji Android [Filimiinta+IPTV's]